Ciidanaka Ammaanka oo gacanta ku dhigay Rag la baabi goobayay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidanka dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa Booliska ayaa xalay howlgal qorsheysan ka sameeyay xaafado ka tirsan degmada Hiliwaa ee Gobolka Banaadir, waxaana kasoo baxaya faah faahino.
Ciidanka ayaa intii uu socday howlgalka ku qabtay rag hubeysan oo burcad ah, kuwaasi oo la sheegay in dadka deegaanka Hiliwaa, xiliyada habeenkii ay dhac u geysan jireen, hayeeshee gacanta lagu dhigay.
Raggaas oo lagu soo bandhigay Saldhiga degmada ayaa gaayay saddex Nin, isla markaana xiligii lasoo qabanayay watay hub iyo waxyaabaha Maankadooriya, iyagoona inta aan la qaban kahor dhaawac u geystay saddex qof oo shacab ahaa.
Guddoomiyaha degmada Hiliwaa ee Gobolka Banaadir Maxamed Geeddoow Shaakir ayaa sheegay in laamaha amniga degmada ay ku guuleysteen soo qabashada ragga hubeysan oo dadka dhici jiray, isagoo u mahadceliya Ciidanka amniga.
Sidoo kale guddoomiye Maxamed Geeddoow ayaa tilmaamay in raggaas lagu xiray Saldhig Ciidan, isla markaana loo gudbin doono Maxkamadda Ciidamada, si cadaalada loo marsiiyo, maadaama ay dadka cabasho ka keeneen oo dhac u geysteen.
Xaafaddo ka tirsan degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa waxaa xiliyada habeenkii ah mararka qaarkood dhac ka geysta rag hubeysan oo burcad ah, waxaana xusid mudan in dhowr jeer rag dhac geystay lagu dilay Magaalada Muqdisho.
Xarun Warbaahneed ee leeyihiin Al-shabaab oo duqeyn lagu burburiyey